Maamulada Puntland iyo Somaliland oo qalab Caafimaad ka gudoomay Imaaraadka Carabta. - Latest News Updates
Maamulada Puntland iyo Somaliland oo qalab Caafimaad ka gudoomay Imaaraadka Carabta.
Muqdisho:-Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa maanta waxaa ay qalab caafimaad ay u deeqday Puntland iyo Soomaaliland.
Maanta ayay aheyd markii Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Magaalada Hargeysa ay ka degtay diyaarad siday agab Caafmaad oo ka timid Imaaraadka Carabta, kaasi oo loogu talo galay in looga hortago Cudurka Coronavirus.
Diyaaradaan oo ka timid wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ay waday daawo iyo qalab Caafimaad oo ay ugu deeqeen Soomaaliland iyo Puntland,kuwaas oo isugu jira kuwo looga hortagayo Cudurka Coronavirus iyo kuwo lagula tacaalo dadka uu haleelo cudurkan.
Sidoo kale garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa Maanta ka degtay diyaarad sida agab kala duwan oo loogu talo galay Cudurka coronavirus sida uu sheegay Wasiirada Caafimaadka Puntland.